သမ္မတ လက်မှတ် မထိုးသည့်တိုင် လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ နှစ်ရပ်ကို အတည်ပြု | ဧရာဝတီ
ခင်ဦးသာ| November 28, 2012 | Hits:378
12 | | ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် မြင်ကွင်း (ဓာတ်ပုံ – Reuters)
ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်မှ အတည်ပြုပြီးသည့် ဥပဒေတရပ်ရပ်ကို နိုင်ငံတော်သမ္မတ အနေဖြင့် သဘောမတူပါက သဘောထားမှတ် ချက်ပေးနိုင်ကြောင်း ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ၏ ပုဒ်မ ၁၀၆ တွင် ဖော်ပြထားသည်။ ထို့အတူ လွှတ်တော်က အတည်ပြုပြီး ဥပဒေတရပ်ရပ်ကို သမ္မတက ၇ ရက်အတွင်း လက်မှတ်ထိုး အတည်ပြုပေးခြင်း မရှိသည့်တိုင် ထိုဥပဒေအား အတည်ပြုပြီးဟု မှတ်ယူရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပုဒ်မ ၁၀၇ တွင် ပြဌာန်းထားသည်။
ပြည်ထောင်စုအဆင့်ကိစ္စကို သမ္မတနှင့် အစိုးရအဖွဲ့၊ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ ခုံရုံးတို့က သဘောမတူသည့်အတွက် ၎င်းတို့နှင့် လွှတ်တော်အကြား ကြီးမားသည့် ပြဿနာ အငြင်းပွားမှု ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကာ ခုံရုံးအဖွဲ့တခုလုံး နုတ်ထွက်ခဲ့ရသေးသည်။
“အစိုးရအဖွဲ့က တချက်လွှတ်အမိန့်နဲ့ပဲ လုပ်ခဲ့ကြတာတွေက ခေါက်ရိုးကျိုးနေတော့ အရင်လိုပဲ ဆက်သွားချင်ပုံရတယ်။ သူတို့ရဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို လွှတ်တော်က ထိန်းညှိမှာကို လုံးဝ မလိုလားဘူးဖြစ်နေတယ်” ဟု ၎င်း က ဆိုသည်။
နိုင်ငံတော် သမ္မတ၏ သဘောထား မှတ်ချက် ၁၀ ချက်တွင် ပြည်ထောင်စုအဆင့် ကိစ္စ၊ လွှတ်တော်သို့ ဧည့်သည်ခေါ်ယူရာတွင် တက်ရောက်သင့်သူ ၃ ဦးသာ ခေါ်ယူရန် ကန့်သတ်ထားမှု၊ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ၏ အထူးခံစားခွင့်၊ ကိုယ်စားလှယ်များ အတွက် ရုံးခန်းဖွင့်လှစ်ရေး ကိစ္စ၊ တားမြစ်ထားသည့် စာရွက်စာတမ်းများနှင့် အချက်အလက် ရယူခြင်း ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ စသည်တို့ ပါဝင်သည်။
ပြည်နယ်နှင့်တိုင်း အစိုးရများ ဘဏ္ဍာငွေလိုအပ်နေ
2 Responses	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website Myo Nyunt Aung November 28, 2012 - 6:02 pm	ဥပဒေသည် နေရာတကာတိုင်း cover လုပ်နိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ အရှင်အာနန္ဒာသည် သူနှင့်သက်ဆိုင်သော လုပ်ငန်းများ ကောင်းမွန်စွာ လုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့ မြတ်စွာဘုရားထံ သူ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ တောင်းခံခဲ့ဘူးပါသည် (ဆရာ ချစ်ဦးညို ရှင်းလင်းမှပိုမြင်မိပါသည်)။ လွှတ်တော်ကို ထိုသို့ယူဆပါသည်။
သမ္မတကြီး ဘက်ကိုကြည့်လျင် သူသည် အစိုးရအဖွဲ့အစည်း၊ ၀န်းကြီး များကို တာဝန်ခံရသူပါ။ ဒီဥပဒေတွင် ၀န်ကြီး များဘက်က အောက်ကျစရာ အကြောင်းလေးတွေ ရှိလာနိုင်ပါတယ်။ သမ္မတကြီးက နေရာတကာ “အေး၊အေး” လုပ် လျင် သူ့လူများရဲ့ယုံကြည်ကိုးစားမှူ လျော့သွားနိုင်ပါတယ်။ သူလည်းသူ့ဘောင်ထဲကနေ သူလက်မှတ် မထိုးတာပါ။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားများကလည်း လက်မှတ်မထိုးရကောင်းလားဟု ဒေါသသံများ မကြားရ၍ လေးစားမိပါတယ်။ ကျွန်တော် ယဉ်မောင်းသင်တန်းတက်တော့ ဆရာတွေကပြောတယ်။ “The laws can’t cover everywhere”. “Be courteous” ဟု သင်ကြား ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ပြသနာ အသေးအဖွဲကအစ နိုင်ငံနဲ့ချီတဲ့ ပြသနာအထိ တစ်ချို့ကိစ္စတွေမှာ မသိချင်ယောင်ဆောင်တယ်ပဲပြောပြော နှူတ်ဆိတ် နေရမဲ့ကိစ္စတွေ ရှိတတ်ကြပါတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ ဆရာတော် အရှင်ဇနကဘိဝံသ ရဲ့ထုံး အတိုင်း “စိတ်ကောင်းရှိဖို့ပထမ” သာအဓိကပါ။
Reply	မြန်မာ တိုင်းရင်းသူ November 29, 2012 - 3:14 am	ဒါတွေတော့ နားမလည်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ဘာ ဥပဒေ၊ ပြဌာန်းချက်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် လူတစု၊ အဖွဲ့အစည်းတခုကိုပဲ အကျိုးပြုတာထက် ပြည်သူအများကောင်းဘို့၊ တတိုင်းပြည်လုံးကို အကျိုးပြုစေတာတွေ ဆိုရင်တော့ သဘောတူပါတယ်။